Lalaon-tsoavaly PMU Madagasikara : Tsy ara-dalàna intsony hoy ny PMU Frantsa -
AccueilVaovao SamihafaLalaon-tsoavaly PMU Madagasikara : Tsy ara-dalàna intsony hoy ny PMU Frantsa
13/02/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Nitondra porofo. Taorian’ny famelabelarana nataon’ny ACHEL, na ny sampandraharaha manana fahefana mpikarakara momba ny soavaly ho an’ny hazakazaka sy ny fiompiana eto Madagasikara, dia namaly bontana ny PMU Madagasikara, ary nilaza fa tsy nisy porofo ny fanazavana nentin’izy ireo. Nivoaka tamin’ny fahanginany nanoloana izany ny PMU Frantsa, izay tompon’ny hazakaza-tsoavaly rehetra, ary nampiseho ny taratasy nalefan’izy ireo ho an’ny PMU Madagasikara, ary nosoratana ho an-Atoa Yannis Montalban, ny datin’ny 28 desambra 2017, ary valin’ny taratasy nalefan’izy ireo ny 12 sy ny 20 desambra 2017. Io taratasy izay nosoniavin’ny Tale Iraisam-pirenenan’ny PMU France, Aymeric Verlet, dia mangataka amin’ny PMU Madagascar ny fahazoan-dalan’izy ireo amin’ny fitrandrahana ireo hazakaza-tsoavalin’ny PMU France, izay efa nanapaka ny fifanarahana nanomboka ny 25 septambra 2017.
Ny fampiatoana dia niainga avy amin’ny tatitry ny ACHEL tamin’ny PMU France, ny tsy fanajan’ny fifanarahana teo aminy sy ny PMU Madagascar. Ny Achel no sampana mahefa, solontenan’ny fanjakana, amin’ny fitrandrahana ny hazakaza-tsoavaly, raha fikambanana tsotra hivondronan’ireo mpiompy soavaly ny ACHEL izay nolazain’ny PMU Madagascar fa nifanaraka tamin’izy ireo. Niainga tamin’ny fidiran’i Madagasikara tamin’ny lalao iraisan’ny firenena maro, na ny « Mass commune » izay niditra teto amintsika nanomboka ny volana mey 2017, ny tsy fanajana ny fifanarahana nataon’ny PMU Madagascar, ka tao anatin’izany ny tsy fandoavana araka ny tokony ho izy ilay 5% azo avy amin’ny fitrandrahana ireo lalao avy amin’ny hazakaza-tsoavaly, sy ny 20% n’ny tamberin’ireo asa mifandraika amin’izany . Manampy ireo ny tsy fahafahan’ny ACHEL intsony manara-maso ny fomba fiasan’io orinasa io amin’ny fitantanana ny vokatry ny lalao sy ny vola zaraina. Maro rahateo ireo mpilalao no efa nametraka ahiahy ny amin’isan’ireo mpilalao tena mahazo, indrindra amin’ny fotoana maha-be ny tontona.
Na teo aza izany rehetra izany, na dia efa nahazo io taratasy io aza ny PMU Madagascar, dia mbola manohy hatrany ny fitrandrahana ireo hazakazaka samihafa. Io taratasy nalefan’ny PMU France io dia manamafy ny tokony tsy hisintonan’ny PMU Madagascar intsony amin’ireo fampahafantarana samihafa amin’ny hazakazaka mitranga ao anatin’ny « Infocentre » sy ny fandefasana ny « Equidia Pro » nanomboka ny 2 janoary 2018. Araka io taratasy io, dia tsy manana intsony zo hampilalao olona amin’ireo hazakazaka frantsay ny PMU Madagascar.